ေပ (80 x 60) က်ယ္ဝန္းေသာေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမကြက္,ၿခံကြက္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္အျမန္ေရာင္းမည္ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8117270 | iMyanmarHouse.com
ေပ (80 x 60) က်ယ္ဝန္းေသာေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမကြက္,ၿခံကြက္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္အျမန္ေရာင္းမည္
5 Jun 2020 10:43 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
5368 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး |	ကြော်ငြာနံပါတ် S-8117270
မြေကွက် ၊ ခြံကွက် မပါ မပါ
ျပည္​ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ဒဲ့​ေပါက္, ၂ ၿခံတြဲ (ေဒါင့္ကြက္+ဂုတ္ကြက္) ​ေပ ၈၀×​ေပ ၆၀ , ၄၆ ရပ္ကြက္, ​ေျမာက္ဒဂုံ. 🏕( စီးပြား​ေရးလုပ္​ရန္​ေကာင္း)🍎,အုတ္တံတိုင္းကာၿပီး ​ေရ​ေျမာင္းလုပ္ၿပီး မီတာ စက္​ေရတြင္း ဂ်ိဳးျဖဴသြယ္ၿပီး ဂရန္အမည္​ေပါက္ ​ေရာင္းမည္.
ၿခံထဲတြင္ သီးပင္ ပန္မာလာစုံ🏞
​ေပ ၄၀×၆၀ ( ၁ ကြက္ျခင္းလဲ​ေရာင္းပါမည္.)
ဂုတ္ကြက္.... 850 lkh
၂ ကြက္တြဲ.....2000 lkh( ညိႏႈိင္း)
ပြည်​ထောင်စုလမ်းမကြီး ဒဲ့​ပေါက်, ၂ ခြံတွဲ (ဒေါင့်ကွက်+ဂုတ်ကွက်) ​ပေ ၈၀×​ပေ ၆၀ , ၄၆ ရပ်ကွက်, ​မြောက်ဒဂုံ. 🏕( စီးပွား​ရေးလုပ်​ရန်​ကောင်း)🍎,အုတ်တံတိုင်းကာပြီး ​ရေ​မြောင်းလုပ်ပြီး မီတာ စက်​ရေတွင်း ဂျိုးဖြူသွယ်ပြီး ဂရန်အမည်​ပေါက် ​ရောင်းမည်.
ခြံထဲတွင် သီးပင် ပန်မာလာစုံ🏞
​ပေ ၄၀×၆၀ ( ၁ ကွက်ခြင်းလဲ​ရောင်းပါမည်.)
ဂုတ်ကွက်.... 850 lkh
၂ ကွက်တွဲ.....2000 lkh( ညိနှိုင်း)
60 ေပ x 80 ေပ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8117270 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ေျမအက်ယ္(45'x60') 1 BN ပါဂရံေျမ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရိွသည္။
မြောက်ဒဂုံ 46ရပ်ကွက်မြေသီးသန့်40x60 စျေးတန်အရောင်းလေးပါ
​ေျမာက္​ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​ ၃၀ရပ္​ကြက္​ ထြန္​းသီရိလမ္​း​ေျမကြက္​အ​ေရာင္​း
မြောက်ဒဂုံ 30ရပ်ကွက် ထွန်းသီရိလမ်းမကြီးမြေသီးသန့်ထောင့်ကွက်စျေးတန်အရောင်းလေးပါ
မြောက်ဒဂုံ36 VIP မြေ 60x80 ထောင့်ကွက်အရောင်း
🌿 မြောက်ဒဂုံ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာအနီး မြေသီးသန့်ရောင်းမည်။
2,400 သိန်း (ကျပ်)
အခြား အရောင်းကြော်ငြာအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ဒဂံု ျပည္လမ္းအနီးတြင္ ေျမကြက္ငွားမည္
အာရွေတာ္၀င္အနီး ဗဟုိလမ္းသြယ္တြင္ ဆုိင္ခန္းအဆင္ေျပ ေျမကြက္ငွားမည္
အခြား အငှားကြော်ငြာအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
2,250 သိန်း (ကျပ်)
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းမကျယ်ပေါ်ရိှ ပြင်ဆင်ပြီး တစ်ထပ်တိုက် လုံးချင်း...
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ